Nizan Cu Pu Trumh Thanhtu Pawl An Buai Dih Hnu Ah Pehzulh In An Meeting An Thok khawh Than. – Onlinenungak
Nizan Cu Pu Trumh Thanhtu Pawl An Buai Dih Hnu Ah Pehzulh In An Meeting An Thok khawh Than.
By chin tawi on January 7, 2021
ထရန့် ထောက်ခံသူ လူအုပ်ကြီးမှ ကွန်ဂရက် အား ဝင်ရောက်စီးနင်း – အစည်းအဝေး ပုံမှန် ပြန်လည်စတင်
ထရန့် ထောက်ခံသူ လူအုပ်ကြီးသည် အမေရိကန် ၏ ဒီမိုကရေစီ ခံတပ်ကြီးအား နာရီပိုင်းခန့်ကြာအောင် ခေတ္တ ထိန်း သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပြစ်ခတ်မှူများ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာမှ အမျိုးသမီးတဦး သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး နောက် ပုံမှန် ပြန် လည် စတင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ညအချိန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆက်လက် ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကက်ပီတို အဆောက်အအုံကို ဝါရှင်တန်စံတော်ချိန် ညနေ ၅:၄၀ မှာ ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ကွန်ဂရက်၏ လုံခြုံရေး အကြီးအကဲက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန် မြို့တော်ဝန် မှ ညနေ ၆ နာရီမှမနက် ၆ နာရီ အထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး အမျိုးသား အစောင့်တပ် ၁,၁၀၀ ကို ခေါ်ယူ တပ်ဖြန့်ချထားခဲ့ပါတယ်။
နေ့လည် ၂:၁၅ မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ကြေညာနေတဲ့ ဒုသမ္မတ မိုက်ပင့်စ်ကိုလုံခြုံရာ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းထဲ ခေါ်သွား
ကက်ပီတိုရှေ့ လုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေကို အတင်းဖြတ်ကျော်ပြီး လူအုပ်ကြီးက ဝင်ရောက်လာကာ ဒုသမ္မတ ရှိရာ စင်မြင့်အထိပင် ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့တာမို့ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ အသုံးပြုခဲ့ရပြီး အမတ်တွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ ပရိဘောဂတွေ ရိုက်ချိုးပြီးလက်နက် အဖြစ် ကိုင်ဆောင်ထားရတဲ့
ထရန့် မှ တွစ်တာကနေ အားပေးနေတာကြောင့် သူ၏ အကောင့်ကို ချက်ခြင်းလိုပိတ်ပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်အတွက် သမ္မတ ထရန့်မှာလုံးဝ တာဝန်ရှိကြောင်း ‌သူ့ကို ‌ယခင်က ထောက်ခံခဲ့သူ များ အပါအဝင် အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ပြောဆိုရှုံ့ချလိုက် ကြပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ထရန့် အဖို့ လုံးဝအရေးနိမ့်သွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကက်ပီတိုကို သွားရောက်ဆန္ဒပြဖို့ သူရဲ့ ထောက်ခံသူများကို အိမ်ဖြူ‌ တော်ရှေ့ထွက်ပြီး ထရန့်က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်၊ အခြေအနေတွေ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်လာ ချိန် ညနေ ၄ နာရီ မှာ သမ္မတလောင်းဘိုင်ဒင် အပါအဝင် သူ့ကိုထောက်ခံသူများ က ကြေညာချက် ထုတ်ပြီး တားမြစ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်း ပြောဆိုကြတဲ့ အတွက် တွစ်တာကနေ အိမ်ပြန်ကြဖို့ ထရန့် က “GO HOME, WE LOVE YOU” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထရန့်ရဲ့ အမာခံ တဦးဖြစ်တဲ့ အိမ်ဖြူတော် ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားရေးမှူးအယ်လီရှာ ဖာရာက တွစ်ဝာာကနေ “ELECTION WAS NOT STOLEN, WE LOST” လို့ ပို့စ် တင်ပြီး ထရန့် ထောက်ခံ သူတွေကို ရှေ့ဆက် မတိုးဖို့ ဟန့်တားခဲ့ရ ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်ရှိ မြို့ပြအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ဥပဒေပြုအမတ် အချို့က ဒုသမ္မတ မိုက်ပင့်စ်အား ဖွဲ့စည်းပုံ အပိုဒ် ၂၅ ကိုသုံးပြီး ထရန့် ကို ချက်ခြင်းဖယ်ရှားဖို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။
ယခုအခါ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ‌ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်များက နှစ်နေရာစလုံးတွင် အနိုင်ရရှိသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်လွှတ်တော် နှင့် အထက်လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးကို ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်းကို ပါတီတခုတည်းက ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဝာာ ၁၈၉၂ မှာ တကြိမ်သာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာမို့ ဒီမိုကရက်‌တွေ အဖို့ ထရန့်ကိုတောင် ကျေးဇူးတင်သင့်လှပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရန့် အဖို့ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက် အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ဒုသမ္မတ က ပယ်ဖျက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆ ထားခဲ့သော်လည်း မိုက်ပင့်စ်က သူသည် ဖွဲ့စည်းပုံ ကို လိုက်နာသွားမယ်လို့ ကြေ ညာချက် ထုတ်အပြီးမှာ ကက်ပီတိုကို ချီတက် အကြမ်းဖက်ကြဖို့သူ့လူများကို ထရန့်က အချက်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Crd: The New York Times